तस्वीरमा हेर्नुहोस् विभिन्न मुलुकले छापेकाे १ लाख भन्दा माथिका नाेटहरु
यस्ताे छ पैसाको अभाव टार्न जिम्बाबेले आफू खुशी छापेको १ खर्बको नोट
प्रकाशित मिति : २०७३ पौष ९ शनिबार , ९,३६० पटक हेरिएको
तस्वीर : सामन्त मार्कस्,
काठमाडौं । तपाईँलाई पैसाको अभाव भयो भने के गर्नुहुन्छ ? थप काम गर्नुहुन्छ, परिश्रम गर्नुहुन्छ या त कुनै अन्य । राज्यको पनि अवस्था त्यही हो । कुनैपनि राज्यले आफूले छाप्ने पैसाको लागि त्यही अनुपातमा पैसा धरौटी राख्नुपर्छ । अनि मात्रै पैसा छाप्न पाईन्छ । तर, पैसाको अभाव भयो भनेर आफैंले भटाभट पैसा छापियो भने त्यो अवस्थामा के होला ?
जिम्बाबेले एकपटक यही खुल्दुली मेटिनेगरी आफैंले भटाभट पैसा छापेर विश्वलाई चकित गराईदिएको थियो । आफ्ना शत्रुहरुसँग मुलाकात गर्नको लागि जिम्बाबेका तत्कालीन राष्ट्रपतिले निकालेको उपायका कारण एक पटक जिम्बाबेको बण्ड नोटको मूल्य पनि अमेरिकी डलर बराबर पुगेको थियो ।
पछिल्लो ७ वर्षदेखि जिम्बाबेको अर्थतन्त्र ५ सय अर्ब प्रतिशतको मुद्रास्फीति पछि अहिले पूर्णतया वैदेशिक मुद्रामा आश्रित बनेको छ । एक पटक त्यहाँको सरकारले गरेको खराव व्यवहारका कारण त्यहाँको स्थानीय मुद्रालाई कसैले पनि विश्वास गर्न छाडेपछि त्यहाँको सरकार पूर्णतया संकटमा प¥यो र आफ्नो गलत निर्णय सच्याउन बाध्य भयो ।
कसरी भयो जिम्बाबेमा संकट ?
कसरी भयो त यस्तो संकट ? यसको झनै कहानी रोचक रहेको छ । एकपटक त्यहाँ बेलगाम रुपमा मुद्रास्फीति चुलियो । कसैगरेर पनि त्यहाँको सरकारले मुद्रास्फीति रोक्न नसकेपछि त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले १ खर्ब डलरको एउटै नोट छपाएर मुद्रास्फीति कमगर्ने प्रयास गरेको थियो ।
२००८को जिम्बाबे सरकारको एउटा रिपोर्टका अनुसार २३ करोड प्रतिशत मुद्रास्फीतिको समेत भोगाई जिम्बाबे सरकारले भोगेको छ । तर त्यहाँका स्वतन्त्रताबादी प्रवुद्ध वर्गहरुको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने त्यहाँको त्यतिबेलाको यथार्थ मुद्रास्फीति ८९ अर्ब खर्ब प्रतिशत पुगेको थियो ।
आज भन्दा ७ वर्ष अगाडि अर्थात् २००८ मा जिम्बाबे दक्षिणी अमेरिकी मुलुकहरुको कारण उच्च मुद्रास्फीतिको समस्यामा पिल्सिरहेको थियो । त्यसबाट पीडित भएपछि जिम्बाबे सरकारले अमेरिकी डलरको बराबर हुनेगरी २ र ५ डलरका मुद्रा छाप्ने निर्णय ग¥यो ।
त्यतिबेला जिम्बाबेका राष्ट्रपति थिए रोबर्ट मुकावे । यसरी केही समय विश्व अर्थतन्त्रसँग सरोकार नै नराखी आफ्नै सुरमा मुद्रा छपाएर आफैं आत्मनिर्भर बनेको मुलुकले पछि भने बाध्य भएर विश्वसँग घुँडा टेक्नु प¥यो । विश्वका कुनैपनि मुलुकले त्यहाँको मुद्रालाई विश्वास नै गरेनन् । जसका कारण त्यहाँ कुनैपनि मुलुक व्यापारमा जोडिन समेत छाडे । अन्ततः जिम्बाबे सरकार विश्वसँग झुक्न बाध्य भयो ।
त्यतिबेला त्यहाँ यस्तो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो कि कुनैपनि व्यक्ति चिया खान बसेको खण्डमा चियाको पैसा तिर्ने बेलामा चियाको मूल्य नै दोब्बर भईसक्ने अवस्था थियो ।
यसरी जिम्बाबेले निकालेको त्यो नोट सम्बवतः विश्वकै सबैभन्दा ठूलो नोट हो ।
कस्ताकस्ता नोटहरु प्रकाशित भए विश्वमा ?
विश्वमा उच्च मूल्यको नोटहरु प्रकाशनको इतिहास हेर्ने हो भने अमेरिकाले सन् १९६९ मा १ लाखको नोट प्रचलनमा ल्याएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रपति निक्सनको निर्देशनमा सो मुद्रा प्रकाशित गरिएको थियो । तर सो मुद्रा पनि प्रचलनमा आउन भने नसकेको बताईन्छ । त्यतिबेला राष्ट्रपति बनिसकेका उडर विल्सनको तस्वीर राखेर मुद्रा प्रकाशित गरिएको थियो । उक्त मुद्रा अमेरिकी संग्रहालयमा अहिलेपनि देख्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, युरोपियन युनियन भित्रका मुलुकहरुले अहिले ५०० यूरोको मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका छन् । तर इटालीले आफू स्वयत्त रुपमा मुद्राको प्रचलन चलाउँखा भने ५ लाखसम्मको नोट प्रचलनमा ल्याएको थियो ।
विश्व रेकर्ड राख्नेगरी भने अहिलेसम्म हंगेरीले मुद्रा छापेको थियो । दोस्रो विश्व युद्धपछि हंगेरीले १० मरनेड अर्बसम्मको नोट प्रचलनमा ल्याएको थियो । जुन सन् १९४६ मा नयाँ नोट अंगिकार गरेसँगै लोप भएको थियो ।
विभिन्न देशका विभिन्न नोटहरुको तस्वीर तल हेर्नुहोस् ।
१ अमेरिकाले छापेकाे १ लाखकाे नाेट
२‍ इटालीले छापेकाे ५ लाखकाे नाेट
३‍ नयाँ नाेट अ‌गीकार गरेपछि पुरानाे नाेटलार्इ बढार्दै ह‌गेरीका स्वीपर